Lufthansa Ma Soo Dhaweyn Doonto 'Mudanayaal iyo Marwooyin'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lufthansa Ma Soo Dhaweyn Doonto 'Mudanayaal iyo Marwooyin'
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Jarmalka Jebinta Wararka • LGBTQ • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Lufthansa mar dambe ma soo dhaweyneyso 'mudanayaal iyo marwooyin'
Lufthansa waxay duugi doontaa salaanta soo jireenka ah ee "Mudanayaal iyo Marwooyin" rakaabka iyadoo laga doorbidayo kala bedelida jinsiga sida 'martida qaaliga ah,' ama 'subax wanaagsan / fiidnimo.'
Rakaabka Lufthansa waxaa lasiin doonaa dookh seddexaad oo jinsi ah inta lagu gudajiro howsha ballansashada.
Lufthansa waa duuliyaha ugu weyn ee duulimaad ee ugu dambeeyay ee ku dhawaaqa 'isbeddel' noocan oo kale ah, oo ku biiraya Air Canada iyo Japan Airlines.
Afhayeenka Lufthansa ayaa sheegay in dhammaan isgaarsiinta gudaha iyo shaqaalaha laga dhigi doono "sinaan jinsi" sidoo kale.
Rakaabka diyaaradaha ee raacaya a Lufthansa duulimaadka mustaqbalka dhow ma sii maqli doono "Meine Damen und Herren" ama "Mudanayaal iyo marwooyin," afhayeen u hadlay shirkadda ayaa maanta ku dhawaaqay.
Lufthansa waa duuliyaha ugu weyn ee ugu dambeeyay ee ku dhawaaqaya 'isbeddelka' noocan oo kale ah Air Canada iyo Japan Airlines.
Intaa waxaa sii dheer, rakaabka Lufthansa waxaa la siin doonaa xulasho seddexaad oo jinsi ah inta lagu guda jiro howsha ballansashada, oo ay weheliso "lab" iyo "dumar".
Isbedelka waxaa si tartiib tartiib ah loogu soo rogi doonaa duulimaadyada Lufthansa, iyo sidoo kale duulimaadyada Switzerland, Austrian, Brussels iyo Eurowings, oo ah shirkado hoosaadyada Lufthansa.
Lfthansa Group waxay sheegtay in isbadalku jawaab u yahay "dood si sax ah bulshada loogu qabtay" oo ku saabsan jinsiga, waxayna ka timid rabitaan ah "in la qiimeeyo dhamaan martida saaran".
In kasta oo maanta lagu dhawaaqay, isbeddelka wuxuu ku jiray shaqooyinka muddo bil ku dhow. Afhayeen u hadlay shirkadda Lufthansa ayaa bishii Juun sheegay in dhammaan isgaarsiinta gudaha iyo shaqaalaha laga dhigi doono "sinnaan jinsi" sidoo kale.
Air Canada waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee hoos u dhigta edeb-darrada dhaqameed ee xasaasiyadda casriga ah markii ay ku beddeshay "marwooyin iyo marwooyin" "qof walba" dib ugu noqoshada 2019. Sida Lufthansa, waxay sidoo kale soo bandhigtay xulasho seddexaad oo jinsi ah oo ku taal boggeeda ballansashada.
Diyaaradda Japan Airlines waxay raacday 2020, laakiin waxay kaliya isbedelka ku dabaqday ogeysiisyadeeda ku baxa luuqadda Ingiriiska. Kaliya maahan bulshada reer Japan inay u dhego nuglaato soo kicinta qaabka reer galbeedka (guurka dadka isku jinsiga ah, tusaale ahaan, sharci ma aha halkaas), salaanta ugu badan ee loo adeegsado luqadda Jabbaan ayaa durbaba jinsi-dhexdhexaad ah.